Elabesifazane liphokophele ukwenza kahle – Bayede News
Elabesifazane liphokophele ukwenza kahle
NJENGOBA namuhla kuqala iNdebe YoMhlaba eJapan,
UZinhle Ndawonde Isithombe: PA
NJENGOBA namuhla kuqala iNdebe YoMhlaba eJapan, iqembu lakuleli lombhoxo labesifazane kule mpelasonto lona lizobe liqala ukuzilungiselela umqhudelwano ozokuba seNew Zealand ngonyaka wezi-2021. ISpringbok Women’s sizodlala imidlalo emithathu yeTest lapho sizobhekana neSpain kanye neScotland. Umdlalo wokuqala uzokuba kusasa ePort ElizabethneSpain. Imidlalo emibili ezotholana kuyo phezulu neScotland, owokuqala wayouzokuba mhla zingama-30 kwephezulu eCity Park Sports Ground, owesibili ubemhla zi-5 kuMfumfu enkundleni efanayo. IBAYEDE ikhulume nentokazi egila
izimanga kuleli qembu muva nje uZinhle Ndawonde ngokubaluleka kwale midlalo. “Le midlalo ibaluleke kakhulu kithina izokwenza abanye bozakwethu ukuthi bakhululeke kulo mdlalo. Sibhekene nomqansa wokuthi senze kahle emidlalweni yamaCommonwealth Games ngonyaka ozayo, nakwiNdebe YoMhlaba. Uma senza kahle kule midlalo lokho kuzosinika ukuzethemba okukhulu,” kusho uZinhle. Ukumela iqembu le sizwe kuyinto engenzeki kunoba ubani kumele usebenze kanzima kulow o mdlalo osuke udlala.” Le ntokazi edabuka eChesterville kodwa yakhulela eNanda, uma ithi fahla ngomlando wayo kulo mdlalo ithe uyihlaya ngoba ayikaze izibone iwudlala. “Lo mdlalo ngawuqala ngowezi-2006 ngifunda eParkhill Secondary School, inhloso yami wakuwukudlala
unobhutshuzwayo okuyiwona engangiwazi kangcono. Kwathiwa awukho ngabe sengithi angizame elombhoxo kwabe sekuwukuqala kwami njalo. Angizisoli kakhulu ngokuthi ngiqome ukudlala lo mdlalo, ngikhuluma nje sengihambe amazwe amaningi ngenxa yawo. Umuntu okunguyena engimbongayo ngakhokonke wuNkuluNkulu, ngoba nguye owangikhanyisela ukuthi ngiqome lo mdlalo,” kusho uZinhle. Waqala ukubonakala ngonyaka wezi-2008 nalapho aqokelwa eqenjini
lesizwe labaneminyaka engama-20 wabe esesayiniswa iqembu elikhulu lakulesi sifundazwe iSharks. Emva kwalokho waba ngukaputeni weSharks ngonyaka wezi-2015, kwathi ngonyaka wezi-2017 wabizelwa eqenjini leSpringbok Women’s Sevens elaliya eLondon. Esonga uthe: “Nginesifiso esisodwa, sokuthi nginqobe indondo ye-Olympics noma eyeNdebe YoMhlaba”. Uma ingekho enkundleni le ntokazi isuke isebenza esikhumulweni sezindiza iKing Shaka Airport lapho isuke iyiFire Fighter. Phezu kwakho konke lokhu iphinde ibe neziqu zeSports Management.